KDEApps7: Codsiyada Beesha KDE ee Goobta Xafiiska | Laga soo bilaabo Linux
Linux Post Ku Rakib | 07/10/2021 06:00 | Aplicaciones, GNU / Linux
Arrintan toddobaad «((KDEApps7) » laga bilaabo taxanaha maqaallada ku saabsan "Barnaamijyada Bulshada KDE", waxaan wax ka qaban doonaa codsiyada beerta xafiiska, taas oo ah, isticmaalka ugu weyn ee ka shaqee guriga iyo xafiisyada. Kaas oo inta badan diiradda saara maareynta dokumentiga, shaqsiga, maareynta macluumaadka elektiroonigga ah ee maaliyadeed, u dirista macluumaadka boostada, iyo kuwo kale.
Kuwa danaynaya inay sahamiyaan 6 -dii hore daabacaadaha la xiriira mawduuca, waxaad riixi kartaa xiriiriyeyaasha soo socda, ka dib markaad dhammaysato akhrinta daabacaadan:
1 KDEApps7: Codsiyada xafiiska si ay u shaqeeyaan
1.1 Xafiiska - Codsiyada KDE (KDEApps7)
KDEApps7: Codsiyada xafiiska si ay u shaqeeyaan
Xafiiska - Codsiyada KDE (KDEApps7)
Hamigan qalabaynta xafiiska, ka "Bulshada KDE" ayaa si rasmi ah u horumaray Codsiyada 22 kuwaas oo aan xusi doonno oo aan faallo ka bixin doonno, qoraal ahaan iyo si kooban, 10 -ka hore, ka dibna waxaan xusi doonnaa 12 -ka soo haray:
Buugga taleefanka: Codsi isku -dhafan oo loogu talagalay maareynta xiriirka mashiinka iyo aaladaha mobilada. Waxay bixisaa meel dhexe oo lagu bilaabo wada sheekaysiga. Iyada oo ku xiran macluumaadka la heli karo ee xiriirka, falalka u dhigma ayaa la soo bandhigi doonaa.
Calindori: Taabashada arjiga jadwalka. Waxaa loogu talagalay aaladaha mobilada, inkasta oo sidoo kale lagu maamuli karo bay'adaha desktop -ka. Isticmaalayaasha Calindori waxay eegi karaan taariikhaha hore iyo kuwa mustaqbalka, sidoo kale waxay maamuli karaan hawlaha iyo dhacdooyinka.
Waraaqaha Calligra: Dhammaystir qalabka xaashiyaha. Waxaa loo isticmaali karaa in si dhakhso leh loo abuuro loona xisaabiyo xaashiyaha badan ee la xiriira shirkad, sida dakhliga iyo kharashyada, saacadaha shaqada ee shaqaalaha, iyo in ka badan.
Heerka Calligra: Codsiga bandhigga, fududahay in la isticmaalo oo dabacsan. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud u abuurto bandhigyo ay ku jiraan waxyaabo badan oo kala duwan, laga soo bilaabo garaafyada ilaa qoraalka, laga bilaabo jaantusyada illaa sawirrada.
Erayada Calligra: Processor erey dareen leh iyo tifaftire miiska Waxay kuu oggolaaneysaa inaad abuurto dukumiintiyo wargelin ah oo soo jiidasho leh dhadhan iyo fudayd. Astaamaha asaasiga ah waxaa ka mid ah: tafatirka ku saleysan qaab-dhismeedka iyo gelinta dukumiintiyada. Intaa waxaa dheer, waxay taageertaa qaabka ODT (Qoraalka Dukumentiga Furan).
Calligra Gemini: Xarunta xafiiska KDE ee aaladda 2-in-1, taas oo ah, waxay u shaqeeyaan sida kiniinnada taabashada iyo laptops-ka caadiga ah.
KAddressbook: Codsi kaydiya dhammaan xogta shakhsiga ee qoyska, saaxiibbada iyo xiriirada kale. Waxay taageertaa adeegyo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan NextCloud, Kolab, Xiriirada Google, Microsoft Exchange (EWS), ama server kasta oo CalDAV ah.
KBibTeX: Codsiga maareynta tixraaca oo loo adeegsan karo in lagu ururiyo buug -yaraha TeX / LaTeX laguna dhoofin karo qaabab kala duwan.
Socdaalka KDE: Kaaliyaha safarka ee dhijitaalka ah oo mudnaantiisu tahay ilaalinta asturnaantaada.
KEuroCalc: Xisaabiye lacagta guud iyo beddelaad.
Barnaamijyo kale ayaa lagu sameeyay tan beerta xafiiska by "Bulshada KDE" Waxay yihiin:
KEXI: Muuqaal dhise codsiyada keydka xogta.
Kile: Interface for LaTeX oo u oggolaanaysa in la isticmaalo dhammaan shaqaynta LaTeX.
KMyMoney: Maareeyaha maaliyadda shaqsiga oo ay ku jiraan shaqooyin tiro badan.
shir: Codsiga wehelka shirarka ee uu abuuray KDE
Kala hadal: Maareeyaha Macluumaadka Shakhsiyeed oo fududeeya maareynta boostada, jadwalka taariikhda, xiriirada iyo kuwo kaloo badan.
SieveEditor: Maareeyaha iyo tifaftiraha shaandhaynta boostada oo leh qoraallada Sieve.
Skrooge: Maareeyaha maaliyadeed shaqsiyeed fudud oo dareen leh, kaas oo kuu oggolaanaya inaad la socoto kharashaadkaaga iyo dakhligaaga.
Teliko: Maareeyaha uruurinta oo bixiya tusaalooyin aan caadi ahayn oo loogu talagalay buugaagta, buug -gacmeedyada, iyo inbadan.
Trojitá: Macmiilka emaylka IMAP wuxuu ku takhasusay siinta si dhakhso leh oo hufan sanduuqyada boostada.
Marka la soo koobo, waxaan ku haminnaa tan Dib -u -eegista 7aad "(KDEAppsXNUMX)" ee codsiyada rasmiga ah ee hadda jira "Bulshada KDE", oo aan wax uga qabanno kuwa beerta xafiiska, ayaa xiiso iyo waxtar u leh dad badan. Oo u adeeg si aad u shaaciso oo aad u dabaqdo qaar ka mid ah kuwan apps ku saabsan kala duwan GNU / Linux Distros. Tanina, iyaduna, waxay gacan ka geysaneysaa adeegsiga iyo baaxadda sida xooggan oo cajiibka ah xirmada qalabka software sidee u qurux badan tahay una hawl badan tahay Bulshada Linuxera na wada bixiya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » KDEApps7: Codsiyada Beesha KDE ee Goobta Xafiiska